Waa kan fayraska kale ee welwelaya Aasiya - teles relay
By bryanekobe Last updated Jan 13, 2021
Taxanahan, waxaan ku eegaynaa cudurada ay u badan tahay inay sababaan aafada adduunka ee soo socota, oo waxaan wax ka baranaa saynisyahannada ku jira tartanka si looga hortago inay dhacaan.
Cudurka faafa ee loo yaqaan 'Covid-19' wuxuu ku qabsaday adduunka intiisa badan. Laakiin maahan qof walba. Muddo sanado ah khubarada cudurrada faafa iyo khubaro kale ayaa ka digayay inaan u diyaar garowno aafo caalami ah.
Cudurada badankood ee khubaradu ka walwalayaan waxay ka yimaadaan xayawaanka. Xaqiiqdii, 75% cudurada cusub ee soo ifbaxa waa kuwa loo yaqaan 'zoonotic'. Covid-19 - oo la rumeysan yahay inuu ka yimid baangado lagu iibiyo suuqyada qoyan ee Shiinaha - kama duwana. Laakiin sida Covid-19, cudurrada zoonotic-ka waxay u noqdaan kuwo qatar u ah bini-aadamka ficilkeenna awgood. Saameynta aan ku leenahay cimilada, ku xadgudubka deegaannada duurjoogta iyo safarka adduunka oo dhan waxay gacan ka geysteen wareegga cudurrada xoolaha. Marka lagu daro magaalaynta, tirada dadka badan iyo ganacsiga adduunka, waxaan dajinnay xaalad ku habboon cudurrada faafa ee soo socda.
WHO ayaa gargaar u dirtay Liibiya iyada oo la socota diyaaradaha Suuriya ee cunaqabateynta la saaray
Qormooyinkan taxanaha ah, waxaan ku eegaynaa lix ka mid ah cudurrada ay u badan tahay inay sababaan waxyaabaha soo socda oo aan eegno shaqada la qabtay ee la doonayo in lagu joojiyo. Laga soo bilaabo awrta badaha sida ee Afrika u qaada hargabka doofaarka ee Yurub, la kulan xayawaanka iyo cudurada leh astaamaha ugu weyn ee faafa oo baro waxa aan sameyn karno si aan u joojino, ka hor inta ay goori goor tahay.
Sii wad dib u hubinta sida aan u cusbooneysiineyno boggan sheekooyinka ugu dambeeyay toddobaadyada soo socda.
Taxanahan waxaa soo sheegay, oo qoray oo soo saaray Harriet Constable iyo Jacob Kushner. Waxaa tafatiray Amanda Ruggeri. Warbixinta taxanahan waxaa maalgeliyey Xarunta Pulitzer.
Miyaan dhunkan karaa aabbahay tallaalay? Iyo su'aalo kale;
Waa tan sababta ay Hindiya ugu deg degtay inay ansixiso ...
Dhibaatada Covid waxay Afrika siinaysaa fursad ay ku beddesho ...
Fiidmeerta miraha ayaa ka duusha suuqa subaxa Battambang, oo ka mid ah meelaha badan ee Kambodiya halkaas oo fiidmeerta iyo bina-aadamku ay xidhiidh dhow yeeshaan maalin kasta (Piseth Mora)
Fayraska Nipah waa mid ka mid ah 10ka cudur ee mudnaanta u leh Ururka Caafimaadka Adduunka oo ay aaminsan yihiin inuu sababi karo faafitaan. Ma jiro wax tallaal ah, waa mid aad u dilaa ah waxaana horeyba uga jiray dhowr cudur oo faafa Aasiya. Waxaan la kulannaa saynisyahano darsaya cudurka kuwaas oo aaminsan in horumarka iyo ku xadgudubka deegaanka fiidmeerta ay ka dhigayso mid kale oo u eg inay u ekaato. Akhri maqaalkeena ku saabsan sida Nipah u noqon karo faafida xigta.
Maqaalkani wuxuu u muuqday kii ugu horreeyay: https://www.bbc.com/future
Gabadha Dennis Rodman waxay dooratay qabyo qoraalka NWSL
Cardiff: Xiddiga caalamiga ah ee reer Ivorian Souleymane Bamba wuxuu la ildaran yahay cudurka kansarka - culturebene
Miyaan dhunkan karaa aabbahay tallaalay? Iyo su’aalo kale; waa kuwan jawaabaha qaarkood
Waa tan sababta ay Hindiya ugu deg degtay inay ansixiso tallaal maxalli ah
Dhibaatada Covid waxay Afrika siinaysaa fursad ay ku beddesho qaabkeeda
Gabon: oo ku hadlaya magaca aabaha, wiilka iyo coronavirus